Ukufunda izincwadi - yinto enhle, kodwa uma kuziwa ukuze ubhale isibuyekezo phezu ticondziso tathishela, abafundi abaningi ulahleke, engazi uqalephi. Ngakho-ke, ake siqale sibheke lokho elikumelelayo lo msebenzi.
Buyekeza - uhlobo ukubuyekeza, umbono umuntu yangasese mayelana umkhiqizo othize, okuqukethwe okuyinto uye wahlola ukuthi bathini bese kuba kubhekwe. Lo msebenzi kufanele kufake hhayi kuphela "angenalutho" umthole oyoxoxa kwezinye izikhathi kusuka incwadi - kubalulekile ukusho ekucabangayo nokuveza yabo nemizwa nivuna okwamanje, noma ngemva kokufunda. Phela, injongo eyinhloko Izibuyekezo - kuyathakazelisa kwabanye yilo msebenzi kangangokuthi kwayena uqobo ifuna ukuwufunda. Awu, wena kwaba lula ukuba bafeze lo umsebenzi wesikole wasekhaya, uzibone abakhangisi ababenza "ukukhuthazwa" wombhali kanye umsebenzi, okuyinto wakhululwa usiba lwayo.
Kanjani ukuze ubhale isibuyekezo: Yenza amanothi
Ngisho at the stage of kokufunda le ncwadi, kuyatuseka ukuba iphedi akhethekile ukukulungisa ezinye izikhathi kusezingeni bakhangwa wena, nobuntu iqhawe futhi isimo sakho siqu, izenzo zakhe, amazwi, nezenzo zakho. Imicabango, imizwelo efika engqondweni yakho manje, kungase kube amarekhodi eziwusizo kakhulu kungenza ngcono umphumela umsebenzi esikhathini esizayo kuphela. Kodwa musa abe "siqu idayari" umfundi enjalo ukulayisha ulwazi olwengeziwe mayelana ukushicilelwa noma umlobi wayo, futhi ukuze abanye bakwazi ukufunda kusuka kuphi.
Kanjani ukuze ubhale isibuyekezo: isikimu
Ngokuvamile, ukubukeza free indzaba-agumenti. Ngakho-ke, isikimu saziso Akekho lapha, ngoba kungenzeka ubuhlungu nje ukusebenza. Kodwa ngandlela-thile, lapho abafundi bamenyiwe ukuveza okuthile "kusukela uqobo", basho into nje aqala ukulahlekelwa. Akumangazi, ngoba thina zijwayele ukubhekana nezidingo, izinhlelo, iziqondiso, njll Ngakho-ke, abanye uhlaka anolaka, sinqume alethe kuwe, ukusiza ukuphendula umbuzo kanjani ukuze ubhale isibuyekezo.
Ngakho, isibuyekezo lifanele lifake hlangana:
1. Ulwazi mayelana umkhiqizo ifomu: isihloko sencwadi, umlobi wayo, isikhathi nendawo lapho kwenzeka lezi zenzakalo, hero eyinhloko elandisayo.
2. mqondo ka-umbono lomkhiqizo, usekelwe ubufakazi ubuqiniso bayo.
3. okukhipha, esihlinzeka kokuhlaziywa ezivamile zazibheka izincwadi.
Manje cabanga umdwebo kanjani ukuze ubhale isibuyekezo yalezi zinto kabanzi.
1. Bhala igama ncwadi, kanye ucacise umlobi wayo. Uma kunjalo phawula lokho isikhathi zezenzakalo ezichazwe zenzeka. Lapha ungakwazi futhi ukubhala ukuthi wazi mathupha ngale nkathi emlandweni by eminye imisebenzi noma kusukela movie. Yisho walabo enezihlabani umlobi ukubeka maphakathi elandisayo.
2. Ingxenye eyinhloko yomsebenzi kufanele ibe umbono wakho yencwadi. Ingabe uchaze isimo sakho sengqondo ukuze umsebenzi, protagonist yakhe, siphawula amaphuzu owenza umbono enkulu kuwe. Cishe zonke izibuyekezo aqukethe incazelo eyodwa noma ngaphezulu asebenzayo abantu lapho elandisa. Chaza ukuthi ngezici zobuntu, izenzo, nezenzo wena ejabulile. It is uvunyelwe hhayi kuphela ubunyoninco izimfanelo ezinhle heroes (isibindi, umusa), kodwa sikuveze nokwedelela heroes negative, abawuthandi wobugwala yabo, nenkohliso, nokungabi meanness. Phela, ezithakazelisa kakhulu ukubheka labo ukubuyekezwa, okuyinto abe ukuqhathanisa, ukuqhathanisa (okuhle nokubi, ukwethembeka kanye komuntu oshade naye, njll).
3. Ekupheleni inikezwe ukuhlolwa kwakho siqu sokufunda le ncwadi. Lapha ungakwazi ukubhala into ukufundisa usebenza, yini wasikisela ngemva kokuyifunda. Ungase futhi ukweluleka okuthile, ufisa abafundi esizayo futhi nimemezele ukuthi bayokujabulela kabusha ufunde umsebenzi futhi. Ukubuyekeza Qedela ezinhle abanye ikakhulukazi uthande ukucaphuna ncwadi.
Manje uyazi ukuthi ukuze ubhale isibuyekezo. Inhlanhla futhi amamaki aphakeme!
Yeka indlela okuyingozi iminyovu ukuluma kanye nendlela yokuzigwema ukuze zingasivimbi khona imiphumela yako emibi